Gallery – AMABHINCA
BREAKING MASKANDI NEWS
Kulesi sithombe uvela egqoke ibhulukwe elincombo nokuyilona elivele lamenza undaba mlonyeni, abanye bembhuqa bethi
Utalabhe Imfezi uZanefa Ngidi
“Kudala ngangishaya izinsizwa ngengoma ngizishaya nezinye izinsizwa. Sidlalile nale nsizwa koNdabizekwayo
Wawususa umsindo uQhosha
“OMseleku bawumndeni owodwa kodwa owehlukene ngezindlu. Ibhova lalingazalwa endlini yangakwabo kaMahawukela
Ushaye udaka emsakazweni
“Angiphikisani nokuphathwa kahle kwabo kodwa nabo uma bengazama ukwehlisa izinga lokuziphakamisa
Abezwene Igcokama neGeza lakwaMgube
“Ngicikwa ilesi sikhova sakwaManqele esesaphendula igama leChalaha into yokudlala ngoba lingasekho lingasakwazi ukuziphendulela
Asifinyeziwe isandla sikaNtencane
“Ngithathe isinqumo sokwenza okuncane uma kukhona engingakwenza kule covid-19 pandemic. Ngiye ngahlangana nozakwethu bakweminye
Bakhala ngendlala abaculi kuMaskandi
“Silimele futhi seqeke engeqiwa ntwala ngalesi senzo esingeke futhi sasiphikisa isinqumo sikamengameli ngoba usiza thina ekugcineni. Kunzima khona ngoba
Cevuzile | Yimi umqali wezinto ezintsha
“Sekuyithuba lami njengomuntu ohlezi eqala izinto la kule genre. Ngiyaninxusa nonke bathandi bomculo noma ngabe hloboluni lomculo ukty ksasa
Iyathilenda eyeGcokama elisha
“Kwesinye isikhathi uma ugqamile phambi kwabantu uyaye ubone ngento encane oyenzayo bese beyithakasela bayenze nabo. Le ngoma yami ehambisana
Big Zulu featuring Mfanie | Lockdown
“Ngizocela ukwazisa bonke abathandi bomculo ikakhulu abathandi bomculo wami ukuthi namhlanje mhlala 23 April 2020 iyaphuma iLockdown
Uhlongoza ukukhipha i-Single track
“Ngibingelele sizwe sakithi enhla nasezansi. Ngithi angivele ngapha nginazise ngemcabango enginayo njengoba ilockdown idla lubi nje. Kungenzeka ngigcine
Akeneme ngabahlola icoronavirus
Umsakazi wokhozi fm uTshatha ngobe ulale engalele ecabanga kabanzi mayelana nokuhaqwa kwakhe ileli gciwane, okuthe ngosuku olufanayo
Iyayihlomisa induna yakwaGuqa
Uthi alidume libathathe. Uthi akuliwe uma kuliwa kulindwe bani. Kuyisifiso sabathandi bomculo abaningi ukubona lezi nkunzi ezimbili esithombeni zishaya ingoma ndawonye
Uqwashisa ozakwabo ngemfundo
Ebona ipost ethi kungenzeka imcimbi ivalwe kuze kube unyaka ozayo, uCevuzile ucevuze wathi kuzomele besukume bezithuntuthe abaculi. Ekhuluma nabathandi bomculo uthe: “Ngyethemba
Baxolelene uGatsheni noGovozile
UGovozile Khumalo obengezwani noGatsheni ukhulume nabathandi bomculo wakhe wathi ufisa ukubazisa ukuthi impi yakhe noGatsheni iphelile. Lo mculi uyena owaba negalelo
Maskandi trending news this week
Ezishisayo kuleli sonto zithe untuyenziwa kuzomele azihlise ayocela uxolo kuKhuzani ngoba ayimusi ndawo lento yokuziphakamisa kanti unekhono elimangazayo
Lizoqopha umlando Igcokama elisha
Insizwa lena edume kakhulu endimeni yomculo izoqhopha umlando ngevideo esezingeni elingakaze libonakale
Lenyukile izinga lokuqashwa kuNjoko
Le ngoma yakhe yokugcina ethi webakithi webakithi webakithi imthathe yambeka endaweni akangakaze wazithola
Kumkhuphulile ukusebenza noKhuzani
Le nsizwa esimnkantsha ubomvu kwezomculo, eshaya intambo enenkosi phakathi, ehamba yodwa kushameni iyathilenda
Selisungule ibandla Igcokama elisha
Ngokusho komthombo ongathembekile, le nsizwa ayinandaba nama sosha nomthetho kamengameli ikhipha
MASKANDI SLIDE SHOW
Sekubongwa ngokusa kuThuthani
Umdidiyeli osecophelweni eliphezulu osebenza estudio sakwa Jan Smith usesimeni esingagculisi neze. Lo mdidiyeli owaba nesandla ekucwileni komkhumbi kaMdumazi
uMdumazi ufisela uThuthani
Umangaze abaningi uMdumazi efisela uThuthani ukuthi alulame ngokushesha. Abathandi bomculo bebelindele ukuthi le nsizwa esencane kodwa ekhobisa ikhono
Lihliphize kwasani Igcokama
Livele lakhwela ladilika kuwo wonke umuntu ebelifisa ukusho something kuyena Igcokama. Kulabo singabala uTshatha, Ngizwe, Khuzani
Akumthathanga sgamu namzuzu ukuyiphendula incwadi akayibhalelwe Igcokama elisha uTshatha. Lo msakazi uphendule ngokuthi “angazi ngone
Alikho elinye ikhasi elingakuthatha likubeke ngakho konke okwenzeka endimeni yomculo kaMaskandi ngaphandle kwaleli mthandi wengoma. Uhlale uhlale ubuye ulivakashele ukuze uzohlala wazi ngakho konke okwenzeka kule ndima yomculo. Sikuthatha sikubeke ngama album amasha, amasingle track, music videos, events, nokunye okuningi
Ngizwe Mchunu Maskandi Festival
Goduka Music Festival
Kuqhuma uphondo kowethuka uTshatha
Awungitshele mhla wawuthuka uCarrot wawuthembeni na? Le nsizwa yahliphiza kwasani mhla ikhipha icwecwe layo elimnandi kakhulu langoDecember. Kuleli cwecwe yahliphiza wonke umuntu eyayifisa ukumtalabha esingabala kubo uTshatha, uNgizwe, uKhuzani nabanye. Kusukela lapho ibanjwe ngophondo emsakazweni
UQhosha uthembisa enkulu ingoma
Akusasele nsuku zamncindo ngaphambi kokuba umculi owaduma kakhulu engumlandeli oqavile nongacoshi phansi weBhova likaDikadika. UQhoshangokwenza kwakhe umfoka Sibisi sekumthathe isikhathi eside ukuthi adedele icwecwe elisha. Ugcine ebadida ngengoma emnandi kakhulu ethi ‘Imawzeni’.
Ufisa ukubeka ingezo ebalazweni
Inxusa lakwaCutty uMthandeni Gcokamelisha Manqele uzwakalise ukuthokoza okukhulu uma ebona ingezo ithanda ukudlondlobala kule ndima yomculo. Ekhuluma nabathandi bomculo wakhe uthe uyabonga kakhulu ukubabona begqoka kahle futhi beqinisa kakhulu kulo mkhiqizo wakwa Cutty kanye neDobbs.
Uhlonishwe ngendondo umfoka Khuba
Usephinde wahlomula ngendondo uKhuzani Mpungose uokuhlonishwa. Ngokusho kwenduna yakwaGuqa uMsizi Mncube, le nsizwa yakwaMpungose ayikwazanga ukufinyelela emcimbini ebimenywe kuwona ethekwini ukuze izozilandela le ndondo ebaluleke kangaka. “Ngingathi nje ngenxa yokuba matasa kwakhe akakwazanga
YITHI ABANIKAZI BALENTO, NOMA UNGAHAMBA UYEPHI IZINDABA UZITHOLA ZISHISA LA
Goto News >
Usekulungele ukukhipha uMzukulu
Ngicela ukunazisa ukuthi mina ngokwami sengikulungele ukunipha ukudla kwendlebe sengiphazamiswe ilo lolu bhubhane. Namanje ngisacela ukuthi sihlale
Baphume kahle oMamjiji emaGezeni
Ngizocela ukuqala ngichithe izinsolo zokuthi kunezizathu ezithinta imali ezenze sashiya iqembu. Cha sizwe sakithi akunjalo. Kuqhuba uMamjiji ongumholi waleli qembu
Ukhala ezimathonsi ngesiginxi sakhe
“Izinyembezi zami azisoze kodwa zawela phansi. Okubi kakhulu ukuthi asilahlekanga kodwa santshontshwa. Ngibuhlungu ngoba kunendawo eyodwa
Ufisela uBahubhe okuhle kodwa
“Ngithatha leli thuba ngiwa ngamadolo esizweni sonke sikaMaskandi ikakhulu isizwe senkosi enamalungelo ayo, leso ke isizwe sama Red